Olee otú Hichapụ pọdkastị site iPhone
Olee otú Hichapụ Pọdkastị si iPhone
Part 1. Olee ka ihichapụ pọdkastị site na gị iPhone
Pọdkastị bu ukwuu n'ihi na ụfọdụ n'ime anyị ma mgbe ụfọdụ i nwere ike inwe ọtụtụ pọdkastị na gị iPhone na ha na-na-elu nke ukwuu ohere. Ị nwere ike ihichapụ ụfọdụ n'ime pọdkastị na-na-elu ohere nchekwa na gị iPhone. Ka anya na otu ụzọ isi mee nke a na a nzọụkwụ site nzọụkwụ nkuzi.
Nzọụkwụ One: Ẹkedori Pọdkastị ngwa
Nzọụkwụ Abụọ: Kpatụ a Podcast usoro ị ga-achọ ka ihichapụ ke "My Pọdkastị" ngalaba.
Nzọụkwụ atọ: si ebe a, chọta na nwunye ga-amasị gị ka ihichapụ na mgbe ahụ horizontally swipe gafee aha. A red bọtịnụ "Hichapụ" ga-egosi na nri nke Podcast. Ka ihichapụ na nwunye, nanị enweta na "Hichapụ"
Ọ bụ na dị mfe. Na nwunye ga-akpaghị aka ehichapụ gị iPhone. Ọtụtụ n'ime oge, ị chọrọ ka ihichapụ ụfọdụ data na gị iPhone otú i nwere ike iji nweta ihe ụfọdụ ohere. Gwakwara elu ohere nchekwa na gị iPhone-enye ohere na ekwentị gị ịrụ na ezigbo etoju. Mgbe ihichapụ ụfọdụ nke gị Podcast ngosipụta nwere ike na-arụ ọrụ, ị chọrọ ka ihichapụ a otutu ejibeghi data iji onwe elu ezu ohere ka ị na-iPhone n'ịrụ ọma.
Part 2. 1 Pịa onwe elu karịa ohere maka gị iPhone
Ihichapụ data n'otu otu mgbe nwere ike iri a nnọọ ogologo oge, oge anyị na-n'aka ị na-adịghị. Ya mere, ị chọrọ onye na ngwa na-ga-enyere gị onwe elu ohere na gị iPhone enweghị na-ewere elu oge dị ukwuu. Wondershare SafeEraser bụ ngwa na-enye gị ohere ime nnọọ na n'etiti ihe ndị ọzọ. Ụfọdụ n'ime SafeEraser si atụmatụ na-agụnye;
Olee otú onwe elu ọzọ ohere na gị iPhone iji Wondershare SafeEraser
Soro ndị a dị mfe nzọụkwụ onwe elu a otutu ohere na gị iPhone.
Nzọụkwụ otu: download na wụnye Wondershare SafeEraser na kọmputa gị. Na-agba ọsọ usoro ihe omume na mgbe ahụ jikọọ gị iPhone gị na kọmputa na iji eriri cables. Ngwa ga-chọpụta gị iPhone na ị ga-ahụ ndị na-esonụ window.
Nzọụkwụ Abụọ: Pịa na "1-click nzacha na mkpocha" na isi window.
Nzọụkwụ atọ: The omume ga ozugbo amalite ka iṅomi ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ anọ: Ozugbo scanning usoro zuru ezu, na ego na ụdị junk faịlụ ga-egosipụta. Pịa "nzacha na mkpocha" onwe elu ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ ise: hụ na gị na ngwaọrụ na jikọọ na kọmputa gị n'oge dum usoro iji hụ na niile junk faịlụ na-ehichapu ya.
Nzọụkwụ isii: mgbe usoro zuru ezu, ị ga-ahụ ndị na-esonụ window na-egosiputa kpọmkwem ego nke uwa na ị nwere na ngwaọrụ gị.
Na nke a ikpeazụ window, ị nwere ike ma họrọ "Rescan" ma ọ bụrụ na ị bụghị afọ ojuju na results ma ọ bụ pịa "Home" na-aga azụ bụ isi window.
Ọ bụ na mfe ọcha gị iPhone nke junk faịlụ. Usoro a dị oké mkpa ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji weghachi ngwaọrụ gị akpasarade arụmọrụ larịị.
Olee otú Naghachi ehichapụ kalenda on iPhone (iPhone 6s gụnyere)
> Resource> iPhone> 1.How iji Hichapụ pọdkastị site iPhone